Qabowga Sweden oo dib u soo laabanaya mar kale iyo Baraf la rajeynayo Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaQabowga Sweden oo dib u soo laabanaya mar kale iyo Baraf la rajeynayo
Maalmaha soo socda waxay noqon doonaan qorax, laakiin wali lama gaarin waqtigii la iska dhigi lahaa dharka qaboobaha, maadaama la filayo in heer kulka uu sii xumaado guud ahaan Sweden, marka lagu daro dabeylo ka dhacaya waqooyiga ilaa koonfurta.
Khabiirka saadaasha hawada ee SVT, Tora Tomasdottir, ayaa sheegay in Cimilada Hada jira aysan ka dhigneen in uu Qabowga dhamaaday isagoo sheegay in Qabowga uu jiiridoono isagoo iska indho tiray Qoraxda la helayo maalmaha Khamiista iyo Jimcaha
Waxaanan filaayay in heer kulka jiilaalka uu ka badnaan doono maalinta jimcaha isla markaana cimiladu ay noqon doonto mid dabeylo ka wada dalka
Magaalada Hodiksvall ayaa diiwaan galisay heer kulka ugu diiran dalka maalintii Arbacada oo ahayd 11 darajo Celsius, laakiin waxay hoos ugu dhacday 2 darajo Celsius maalintii Khamiista.
Cimilada ayaa ka qabownaan doonta Woqooyiga Svilland iyo Koonfurta Norland, halkaas oo heerkulka maalintii uu hoos ugu dhici karo in ka badan 10 digrii. Heerkulku wuxuu u dhexeyn doonaa 0-5 ka hooseeya eber koonfurta, iyo 0-5 ka hooseeya eber xagga woqooyi. Jiilaalku wuxuu sii socon doonaa inuu ahaado qabow Jimcaha, halka heer kulka xoogaa kor u kici doono sabtida sababo la xiriira dabaylaha galbeedka , inkasta oo barafku ka da’ayo waqooyiga, ka dib dabaylaha woqooyiga iyo hawo qabow ayaa mar kale soo laaban doona Axadda.
sidoo kale ayaa la filayaa maalmaha soo socda baraf dhanka koonfureed ee dalka.